Guta duku reFrance reCannes nderimwe remakamuri anonyanyozivikanwa paCote d'Azur. Pane zvinhu zvose zvinodiwa zvezororo risingakanganwiki: mahombekombe akanaka ejecha, mahombekombe emahombekombe, maresitorendi akanaka, pamwe nemafambirwo emafashoni. Uyezve, muCannes uchawana nhamba huru yemapakiki anonyarara, anocheka uye minda, iyo inofanirwa kwezororo remhuri kana zuva rorudo. Uyewo, vashanyi veCannes, iri kumaodzanyemba kweFrance, vanotarisira zvakawanda zvezvikwereti uye zviitiko zvakakurumbira munyika.
Mabhiza akakodzera kunyatsotariswa. Mushure mezvose, kwete nzvimbo dzose dzekushanyira dzimba dzine bhandi dzejecha dzegoridhe uye dzinosununguka kusvika kumvura. Kunyanya mashizha muCannes ari oga, zvirokwazvo akashongedzerwa nezvose zvaunoda, asi mitengo iri pano yakaisvonaka. Kunyange zvakadaro, inofanira kuonekwa kuti kune maguta emasasa akasununguka uye, zvisingaoneki, asi maambura nemahombekombe akafanana pano anogonawo kutengwa uye zvakadhura. Zvisinei, nemhaka yekuwanika kwayo, mabhishi aya ane ruzha uye akazara.
Imwe yenzvimbo dzakakurumbira munyika mukufamba, pamwe chete nepamusoro pehupenyu hwepanyika hweCannes ndiyo Croisette. Uyu ndiwo mugwagwa unoshamisa nemichindwe yakareba, nzvimbo dzinotumbuka uye mapaki, anotarisa kumhenderekedzo yeGungwa reMediterranean uye anoparadzanisa guta kubva kumahombekombe. Pakati pemugwagwa kune mabhizimusi anodhura, mahombekombe emahombekombe uye mabhotique, izvo zviri zvekuzivikanwa kweHarare Couture dzimba.
Chikuru cheRerin Islands, St. Margaret Island, chiri maminitsi gumi nemashanu kubva kuAld Port Cannes. Nenzira yeGeneral Richelieu muzana remakore re XVII, Fort Fort yakavakwa pano, iyo yakareba nguva yakashandiswa sejeri yevaparairi vakakosha zvikuru. Mukuwedzera, kwaiva pano iyo musungwa asingazivikanwi, anozivikanwa munhau se "Iron Mask," akanga achiziya. Nhasi kune Musimusi weGungwa, iyo ichakuvhenekera iwe munhau yekuputsika kwechikepe, uye iyo kamu kemusungwa yakakurumbira yakachengetedzwa muhupenyu hwekare uye inoramba yakasununguka kuvashanyi. Mukuwedzera pane kushanyira pfuma yezvakaitika kare, chitsuwa chacho chinogona kuva chakanakisa kufamba mumakanda uye mapaini, kushambira uye kupisa zuva pamhenderekedzo dzakadzika, uye kunyange kutamba.
Palace of Festivals uye Congresses
Rimwe doro guru regirasi nekrete ndiro nzvimbo inozivikanwa zvikuru muCannes. Iri muimba iyi iyo International International Cannes inobatwa gore negore uye iri pano kuti vashanyi vanokudzwa veCannes uye nyika dzinofanirwa kusimudzirwa kumakamuri pamwe chete nehope tsvuku. Panguva ino muguta rinotonga chaizvo mhepo yemhepo. Kubva mangwanani kusvika usiku, mapoka evanhu vanofambira uye vanogara vanofamba-famba vachitenderedza Palace of Festivals mune tariro yekusangana nezvifananidzo zvavo. MuCannes, kwakapoteredza imba yamambo iAlley of Stars, uko pane mabwe mabhesi akasiiwa mazamu emichindwe awo mafirimu emagetsi, akapa zvikomborero zvikuru zvemutambo. Mukuwedzera pamitambo yefirimu, nhamba huru yemisangano nemisangano yepasi pose inoitwa pano.
Mutambo Wemoto MuKansnes
Kana hove yako muCannes inowira munaJuly-August, ipapo iwe uchava nerombo rekushanyira chimwe chezviitiko zvinoshamisa pane Cote d'Azur yose - Mutambo Wemoto. Pamutambo uyu wegore negore, mapoka anobva kunyika dzakasiyana-siyana anokwikwidzana pakati pavo nokuda kwekuratidzwa kwakanakisisa kwemoto uye pyrotechnics. Fireworks inotungamirwa kubva kubheji, iyo inowanikwa mazana emamita mamita kubva kumahombekombe, uye zvose izvi zvinoshamisa zvinotaridzika zvinogona kuonekwa zvakakwana pasina chero nzvimbo ipi zvayo yezvokudya zvegungwa.
Cannes isarudzo yakanakisisa kune vatashanyi vanorota gungwa rinodziya uye maitiro akajeka. Unopfuurira rwendo urwu neCote d'Azur, unogona kushanyira dzimwe nzvimbo - Nice , Monaco , Saint-Tropez nevamwe.
Mamiriro ekunze ku Dubai ne mwedzi
Essentuki - zvitsva
Zvaunofanira kuita kana sangano rekufambisa rakanyengedzwa - mazano kuvashanyi
Kutarisa muCheto, Turkey
Iyo tsime rakakwirira pane rose
Ndinoda visa kuTurkey here?
Isai masutuketi zvakanaka - zvose zvichabatanidzwa!
Kuongorora musasa muBali
Mazororo muTunisia nevana
Inosungirira nemiti tsvina
Ndezvipi zvigunwe zvinoita sezviri?
Serena Williams: "Amai havana kumbopenga!"
Iro marato chibereko kana yemiriwo here?
Progesterone haina kukwana - zviratidzo
The Golden Taurus - ingozi ipi yekunamata chifananidzo?
Angelina Jolie achadzidzisa kuLondon School of Economics uye Political Science
Nzira yekukura sei muti wemu tomato?
29 mienzaniso yemararamiro emuviri wemakati
Kudya ne bloating
Fetus yakakura pakuberekwa - zviratidzo
Soap dish nezvangu maoko
Mabhanhire ematehwe emadzimai - maitiro aungasarudza uye kuti ungapfeka sei zvakanaka?
Zvipfeko zvebhizimisi - mbatya yekupfeka
Wechipiri akaurayiwa akaparidzirwa, uyo akapomera Kevin Spacey zvekunetswa
Ipai Gadzira Miti
Bhandi Adidas - ndiyo yakanakisa mitambo yemitambo uye mavara kubva muzita rakakurumbira
Nzira yekusarudza sewaini yezvokupfeka?